Izinqolobane zokubulala ukhula - I-US Right to Know
Inselelo ebhekiswe kuhlelo lokwenziwa kwezigaba zokuhlala kweBayer Roundup
Posted on June 26, 2020 by UCarey Gillam
Uhlelo lokubambezela noma yiziphi izimangalo ezintsha zomdlavuza weRoundup iminyaka eminingi bese susa umbuzo obalulekile wokuthi ngabe umbulali wokhula uwubangela noma cha umdlavuza kusuka kumajaji kuya kuphaneli elikhethwe ngesandla lososayensi babhekene nokuphikiswa okungenzeka kwabanye babameli babamangali abaqala futhi bahola isimangalo esenziwa ngobuningi sibhekiswe kumenzi weRoundup uMonsanto, kusho imithombo esondelene necala.
Amalungu amaningana amafemu omthetho ahola izindondo ezintathu kwezintathu ezihlasela iziguli ezinomdlavuza elwa neMonsanto acabanga ukuphonsela inselelo imigomo yesiphakamiso "sezenzo zesigaba" esixoxiswene phakathi komnikazi weMonsanto uBayer AG kanye neqembu elincane labameli abebengakaze okuhamba phambili ecaleni le-Roundup, kusho imithombo.
Isiphakamiso sokuxazulula isenzo sesigaba siyinto ye-skukhala ama- $ 10 billion Ukuxazululwa kwamacala eRoundup uBayer umemezele ngoJuni 24.
Esivivinyweni ngasinye esabanjwa kuze kube manje, amajaji athola ukuthi isisindo sobufakazi besayensi sifakazele ukuthi ukuvezwa kweRoundup kubangele ukuthi abamangali bathuthukise i-non-Hodgkin lymphoma (NHL) nokuthi iMonsanto ihlanganise izingozi. Kepha ngaphansi kwesiphakamiso lowo mbuzo uzoya "ezinhlakeni zesayensi" ezinamalungu amahlanu, hhayi ijaji.
"Ngokuyisisekelo kunciphisa ummangali ilungelo labo lomthethosisekelo lokuqulwa kwecala," kusho omunye umthombo osondelene nale nkantolo.
Kukukhokhelwa kwesigaba okuvinjelwe izosebenza kunoma ngubani odalulwe ku-Roundup owayengazange afake isimangalo noma agcine ummeli kusukela ngoJuni 24, 2020, noma ngabe loyo muntu utholakale enomdlavuza noma ukholelwa ukuthi kungenxa yokuchayeka kweRoundup.
Uhlelo lwahlanganiswa yiBayer nezinkampani zabameli zikaLieff Cabraser Heimann & Bernstein; Ukucwaningwa kwamabhuku & nozakwethu; I-Dugan Law Firm; nommeli uSamuel Issacharoff, uReiss Professor wezomthetho-sisekelo eNew York University School of Law.
Lesi sivumelwano kufinyelelwe kuso ngemuva konyaka cishe owodwa "wemizamo engapheli" yezingxoxo, ummeli u-Elizabeth Cabraser Kusho isimemezelo enkantolo esekela ukuhlinzekwa kwesigaba okuhlongozwayo.
Kungabeka “isikhathi sokuma” lapho abamangali ekilasini abakwazi ukufaka amacala amasha ahlobene neRoundup. Futhi ifuna amalungu ekilasi ukuthi akhiphe "noma yiziphi izimangalo ezibhekiswe eMonsanto ngokulimala kokujeziswa kanye nokuqashwa kwezokwelapha okuhlobene nokuchayeka kwe-Roundup ne-NHL."
Okuphawuleka kakhulu ukuthi uhlelo luthi kunokuba kuqhutshekwe phambili nokuqulwa kwecala elinye lamajaji, kuzosungulwa iphaneli lososayensi ukunquma "impendulo eyiyo" "embuzweni osemkhawulweni" wokuthi ngabe kukhona ukuxhumana okuyimbangela phakathi kweRoundup neNHL .
Uhlelo kubiza iBayer ukukhokha kuze kufike ku- $ 150 million ngezimali nezindleko zabameli abathintekayo kanye “nemiklomelo yesevisi yabamele isigaba” efinyelela ku- $ 25,000 kumuntu ngamunye noma isamba esingu- $ 100,000.
Sekukonke, iBayer ithe izobeka eceleni imali engu- $ 1.25 billion ngaleli lungiselelo. Le mali ibizosetshenziselwa ukunxephezela amalungu ekilasi atholakale ene-NHL "ngemiphumela yokulibaziseka" kwamacala, nokuxhasa ucwaningo ngokutholakala nokwelashwa kwe-NHL, phakathi kokunye.
Isicelo sokufuna imvume yokuqala yalolu daba sifakwe ngoLwesithathu eNkantolo yesiFunda e-US sokuba isiFunda esiseNyakatho yeCalifornia siphathwe yiJaji uVince Chhabria. I-Chhabria ibibheke amacala amaningi we-Roundup ahlanganiswe ndawonye njengezikhalazo eziningi. Ekweluseni inqwaba yamacala asefakiwe, uChhabria wengamele olunye lwezilingo zeRoundup, kanye nalokho okwaziwa ngokuthi ukulalelwa kwe- "Daubert", lapho ezwa khona izinsuku zobufakazi besayensi ezinhlangothini zombili wabe esenquma ukuthi kunokwanele kwesayensi ubufakazi bokubangela ukuqhubeka kwamacala.
Isiphakamiso sokuhlala ngokuhlanganyela saxoxisana ngokuhlukile kunesivumelwano esikhulu esenziwe namafemu abameli abahola phambili.
In the ukuhlala okuyinhloko, I-Bayer ivumile ukuhlinzeka ngama- $ 8.8 billion kuya ku- $ 9.6 billion ukuxazulula cishe amaphesenti angama-75 wezicelo ezingaba ngu-125,000 ezifakiwe nezingagcwalisiwe ezilethwe ngabamangali abasola ukutholakala kweM Roundanto kaMonsanto ngokuthuthukisa kwabo i-non-Hodgkin lymphoma. Abameli abamele ngaphezulu kwabamangaleli abangaphezulu kuka-20,000 XNUMX bathi abavumanga ukuvumelana neBayer futhi lawo macala kulindeleke ukuthi aqhubeke nokusebenza ngendlela yohlelo lwenkantolo.
Yize iMonsanto ilahlekelwe yisilingo ngasinye kulezi ezintathu ezigcinwe kuze kube manje, iBayer igcina izinqumo zamajaji zinamaphutha futhi zisekelwe kumzwelo hhayi kwisayensi ezwakalayo.
Ukukhethwa Kwephaneli Yesayensi
UBayer nabameli besigaba esihlongozwayo bazosebenzisana ukuze kukhethwe ososayensi abahlanu abazohlala kulokho okuzoba yiphaneli "elingathathi hlangothi, elizimele", ngokohlelo. Uma bengavumelani ngokwakhiwa kwephaneli uhlangothi ngalunye luzokhetha amalungu amabili bese kuthi lawo malungu amane akhethe okwesihlanu.
Akekho usosayensi osebenze njengongoti kumacala we-federal multidistrict Roundup litigation ozovunyelwa ukuba abe sephaneli. Ngokuphawulekile, akekho noyedwa umuntu "oxhumane nanoma yimuphi uchwepheshe" ecaleni elibhekene nodaba.
Iphaneli lizoba neminyaka emine lokubuyekeza ubufakazi besayensi kepha lingacela ukuthi kwelulwe isikhathi uma kunesidingo. Ukuzimisela bekuzobopha nhlangothi zombili, kusho uhlelo. Uma iphaneli linquma ukuthi kukhona ukuxhumana okuyimbangela phakathi kwe-Roundup ne-NHL, abamangali bangaqhubekela phambili ukufuna izivivinyo zezimangalo zabo ngazinye.
"Ulwazi lunamandla futhi lokhu kuhlala kunika amalungu ekilasi ukuthi abambe iMonsanto ngokuziphendulela ngokulimala kwabo uma iSayensi Iphaneli ithola ukuthi le nkinga yenelisekile," kusho uhlelo.
Ukugcwaliswa kwenkantolo yenhlangano kucela ukulalelwa kokuqala kokuvunywa kungakapheli izinsuku ezingama-30.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker, Ukukhangisa Bayer, California, umdlavuza, inkantolo, EPA, ukulima, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, Monsanto, i-non-Hodgin lymphoma, RoundUp, isayensi, umbulali wokhula